IINKQUBO ZESOFTWARE EZINGAMA-25 EZIPHAMBILI ZESOFTWARE (YASIMAHLA KUNYE NENTLAWULO) - UKULUNGISWA NGAPHAKATHI
Eyona ukulungiswa Ngaphakathi Iinkqubo zeSoftware ezingama-25 eziPhambili zeSoftware (yasimahla kunye neNtlawulo)
Iinkqubo zeSoftware ezingama-25 eziPhambili zeSoftware (yasimahla kunye neNtlawulo)
Ngaba ukhangela indlela emnandi kwaye elula yokuyila amagumbi akho kunye nokuphupha ekhaya ukuqala? Ukuba kunjalo unethamsanqa, kuba ndibeke uluhlu lweenkqubo endizithandayo zasekhaya zoyilo lwesoftware. Ndiyathemba ukuba uya konwaba njengoko ndizamile ngesoftware eyahlukileyo.
1. Uyilo lweSoftware yoyilo lwangaphakathi (Simahla) Siye saseta i-app yoyilo yasimahla kule ndawo ekuvumela ukuba uyile kwaye uyile eyakho eyakho indawo oyakhele kuyo ngokusebenzisa isikhangeli sekhompyuter yakho. Ngobambiswano nomnye wababoneleli besoftware yoyilo ungakhawuleza uyile naliphi na igumbi ekhayeni lakho.
Isoftware ikuvumela ukuba wenze igumbi elinye okanye ubeko lwekhaya lonke kwi-2D okanye kwi-3D umbono kwaye kulula kakhulu ukuyisebenzisa. Uninzi lomsebenzi lusimahla kwaye akukho ukhuphelo. Yizame ngoku… -> Cofa apha ukuze ufumane ifayile ye Isoftware yoyilo yasimahla
2. Isicwangcisi 5D (Simahla) Isicwangcisi 5D sisixhobo sasimahla esenziwe kwi-Intanethi onokuyisebenzisa ukubona, ukudala kunye nokunikezela ngezicwangciso zakho ezineenkcukacha. Usebenzisa iindlela ezahlukeneyo unokwenza naluphi na uhlobo lwesicwangciso somgangatho osifunayo kwi-2D kwaye utshintshele kwi-3D enefoto yokwenyani ukongeza izinto zakho zokugqiba.
Umhleli okwi-intanethi ukuvumela ukuba ukhethe kwizinto ezahlukeneyo zangaphakathi nangaphandle kunye nokuhlengahlengisa ubungakanani, kunye nokuphakama kwento efumanekayo kwikhathalogu yeempahla ezingama-3000k kunye nokuhombisa. Ungongeza ifanitshala, izixhobo zombane kunye nokuhombisa kuyilo lwakho.
Unokongeza amagumbi, iindonga kunye nokwahlulahlula ngokurhuqa kwaye ubaphosa apho ufuna khona. Ukongeza unokukhetha imibala eyahlukeneyo, iipateni kunye nezinto ukuze ujongeke ngokuchanekileyo. Umzekelo ungongeza imibala eyahlukeneyo yomthi, iphepha lodonga, iintlobo zeethayile okanye nantoni na onokucinga ngayo.
Nje ukuba uyile uyilo lwakho ungarhuqa kwihombo oyithandayo, kunye neefenitshala zokwenza ikhaya lamaphupha akho.
Isicwangcisi 5D seDemo yeVidiyo
Undwendwelo - Umcwangcisi 5D
3.Ikhaya elimnandi 3D (Simahla) I-3D yasekhaya emnandi yindawo evulekileyo yoyilo lwangaphakathi lwesoftware, oko kuthetha ukuba simahla ukusebenzisa. Amateurs kunye neengcali ngokufanayo bayisebenzisa ukuzoba iiplani zendlu, bazilungiselele ngefanitshala, kwaye babone iziphumo kwi-3D.
Kukho izinto ezininzi ezimeleyo kule software. Ungazoba iindonga kwaye ungeze amagumbi ngaphezulu komfanekiso osele ukhona wesicwangciso sasekhaya, nakumanqanaba amaninzi. Isoftware ikuvumela ukuba utshintshe imibala kunye noburhabaxa bemigangatho, udonga, nophahla kunye nokungenisa iipateni zakho ukuba awuboni ozithandayo.
Ukongeza, ungatsala kwaye ulahle ifanitshala, iingcango, iifestile, kwaye ukhethe kwikhathalogu enkulu yeemodeli ze3D kwaye ukhuphele nangakumbi kwi-intanethi eyenziwe ngabanye abasebenzisi. Unokwenza ngokwezifiso ifenitshala oyisebenzisayo ukutshintsha ubungakanani, umbala, ubume, ukuphakama kunye nokuziqhelanisa ukuze ufumane eyona nkangeleko uyifunayo.
Isoftware ikwanento epholileyo ekuvumela ukuba uzulazule kuyilo lwakho usebenzisa umbono wasemoyeni okanye kwindawo yokujonga undwendwe ngaxeshanye. Emva kokuba ulugqibile uyilo lwakho unokwenza umfanekiso-okwenyani kwimini okanye ixesha lokujonga ixesha. Emva koko unokuprinta okanye ugcine isicwangciso sakho sasekhaya kunye nembono ye-3D.
Isifundo seVidiyo esimnandi seKhaya le3D
Undwendwelo - I-3D yasekhaya emnandi
4.I-MyVirtualHome (yasimahla kunye neNtlawulo) I-MyVirtualHome isebenzisa isixhobo sokutsala kunye nokwehla ukwenza iiplani zasekhaya ngokukhawuleza. Unokukhetha kumagumbi anikezelwe ngaphambili kwaye uthathe indawo ubeke kuyo. Nje ukuba ungene endaweni unokwenza indawo ngokwezifiso ubungakanani bayo kunye nokufaka iingcango kunye neefestile ngendlela ofuna ngayo. Ukuba sele unesicwangciso esele sikhona, ungangenisa umfanekiso kwaye wakhelwe phezu kwawo ukuze usisebenzise njengesikhokelo sokufumana ukujonga okufanelekileyo.
Isoftware ibonelela ngekhathalogu yemveliso yefanitshala kunye nokuhombisa onokukhetha kuyo onokongeza kuyilo lwakho. Isoftware ikuvumela ukuba utshintshe imibala, uburhabaxa kwaye uzame iintlobo ngeentlobo zeemveliso zokwakha ukuze ubone ukuba ziyichaphazela njani i-aesthetics yekhaya lakho lamaphupha.
Isingeniso seMyVirtualHome Software
Ukutyelela -I-MyVirtualHome (Indawo engezantsi kuJan - 2017)
5. UMyili weSithuba 3D (Simahla) Le yinkqubo entle yokuzoba iiplani zomgangatho kwaye inikezela ngembono ye-2D kunye ne-3D. Emva kokuba uyile uyilo lwakho lwasekhaya ungasebenzisa umsebenzi ukufaka i-3D yokuhamba ngamava. Ungathumela ngaphandle indalo yakho egqityiweyo ukwenza ii-360 ° zokhenketho ezibonakalayo onokuzijonga kwaye wabelane ngazo kwikhompyuter yakho, kwithebhulethi, okanye kwisixhobo esiphathwayo.
Kuba uMyili weSithuba asisicelo sewebhu esikwi-Intanethi akufuneki ukuba sifakwe kwikhompyuter yakho. Ngoku isebenza kuzo zonke iinkqubo zokusebenza kunye nemigangatho yesikhangeli.
kunye nobungakanani bengubo yomtshato yeshawari
Nayi iMboniso yeVidiyo:
Undwendwelo - Umyili wendawo
6.Planner Planner (Simahla & ehlawulelweyo) I-FloorPlanner yinkonzo yoyilo ekwi-intanethi esebenza kwisikhangeli sakho sewebhu. Ukhululekile ukusebenzisa usetyenziso kodwa awunako ukugcina indalo yakho kunye nohlobo lwedemo yasimahla. Ngokusebenzisa usetyenziso unokwenza izicwangciso zangaphakathi, okanye zangaphandle.
Izicwangciso zinokufakwa kwiakhawunti yakho yemidiya yoluntu, okanye iwebhusayithi ukuze wabelane nabahlobo kunye nosapho. Insiza ikwalungile kubaqeqeshi bezindlu nomhlaba abafuna ukwenza izicwangciso zomgangatho wokusebenzisana kubaxhasi babo.
Nantsi iVidiyo eNtsha eNgenisayo:
Undwendwelo - Umcwangcisi woMgangatho
7.HomeByMe (Simahla) Isoftware yasekhaya yeByMe ikuvumela ukuba uzobe iiplani zakho zasekhaya kwi-2D kwaye ukhethe zonke iinguqulelo ozifunayo kwaye ujonge iziphumo ze-3D ngexesha lokwenyani. Kwinkqubo yasimahla yomelele kakhulu kwaye ibonelela ngezixhobo ezahlukeneyo ezifumaneka kwiinkqubo ezininzi ezibizayo.
Ezinye zezinto eziphambili zibandakanya indawo yomzobo ekuvumela ukuba uchaze ngqo imilinganiselo yobukhosi okanye yemilinganiselo yodonga. Kukwanakho ukungenisa eyakho imifanekiso yeplani yokuzoba ngaphezulu. Unokwenza izinto ezininzi zasekhaya ezinje ngeengcango, iifestile, izinyuko kunye neziseko zamandla, iindawo zokungenisa igesi, iindawo zombane, iiyunithi ze-ac, kunye neeiradiyetha. Ukongeza apho unokubandakanya isicatshulwa esityebileyo kunye nesichazi-magama kumzobo wakho wokulebhelisha igama lamagumbi athile okanye indawo ngaphakathi okanye kufutshane nendlu yakho.
Jonga ividiyo yeKhayaByMe:
Undwendwelo - IkhayaByMe
8.I-Autodesk HomeStyler (Simahla) I-Homestyler ngokuqinisekileyo yenye yezona zixhobo zilula yoyilo kwi-Intanethi ezikhoyo ngoku. Isoftware yabo isebenza kwisikhangeli sakho kwaye ungayisebenzisa ukwenza iindawo zakho ezifanelekileyo zangaphakathi kwaye uhambe nge-360 ° ujikeleze uyilo lwakho olutsha. Ukudala iindawo zangaphakathi kunokuphuma usebenzisa iimpahla ezingaphezu kwekhulu ze-catalog kunye nezinto ezivela kwiimpawu ezikhokelayo kwizicwangciso zakho zomgangatho.
Banikezela ngeendlela ze-2D kunye ne-3D. Nangona kunjalo, okwangoku abavumeli ukubanakho ukunikezela ngokuhlekisa okanye ukukhuphela ngaphandle. Endaweni yoko bavumela abasebenzisi ukuba bathathe umfanekiso woyilo lwabo lokukhuphela kwiikhompyuter zabo.
Undwendwelo - Autodek Homestyler
9.GumbiToDo (Simahla) I-RoomtoDo sisixhobo esisebenzisanayo esisekwe kwilifu onokusisebenzisa ukuyila amagumbi kulwazi lwakho kwi-3D. Banikezela ngonxibelelwano olulula olusebenzisa izinto ezahlukeneyo zokuhombisa, ifanitshala, iingcango kunye neefestile ukufumana isitayile osifunayo.
Bukela iVidiyo emfutshane yokuNgenisa:
Undwendwelo - Igumbi:
10. Igumbi lokuKhangela (simahla) Igumbi Sketcher kulula ukusebenzisa isixhobo sokuyila kwakhona kunye noyilo lwasekhaya. Ukudala izicwangciso zomgangatho kunokwenziwa kusetyenziswa isixhobo sabo sokutsala kunye nokwehla. Uyila isicwangciso sakho somgangatho kwi-2D ukuzoba iindonga, kwaye inkqubo iya kukubonisa ubungakanani njengoko uhamba. Emva koko faka iifestile, iingcango, ifenitshala, i-flooring, kunye nepeyinti ukuze wenze ngokwezifiso izinto ezifanelekileyo zeprojekthi yakho.
Emva koko ungathatha umfanekiso walo naliphi na igumbi olilelileyo kwaye uliguqulele kumfanekiso ophezulu we-3D. Ungatshintshela kwi-3D ukufumana uhambo lwe-3D lwesicwangciso sakho somgangatho.
Bukela i-Sketcher yegumbi uhamba-ngeVidiyo:
Undwendwelo - Sketcher yegumbi
11. UMyili oyiNtloko woYilo lwangaphakathi (ehlawulwe) Isoftware yoyilo lwasekhaya ye-3D ilungile kubathandi basekhaya be-DIY abafuna ukwenza ngokwenyani kwaye bayile imibono yabo yasekhaya. Kukho indlela yokwenza iividiyo ukukunika imiyalelo ethile ngendlela yokusebenzisa inkqubo kunye nokusebenzisa izinto zayo ezininzi.
Isoftware ibonelela ngelayibrari enkulu yezinto ezingama-4 800 zokwakha ezinokusetyenziselwa ukufumana isitayile kunye nokugqiba okufunayo kuyilo lwakho. Unokuzama imixholo eyahlukeneyo yemibala, izitayile zeminyango, imiphezulu yeetafile yasekhitshini, ukubuyela umva, iikhabhathi, iindonga, iifestile, ukogquma udonga, ukubumba isithsaba, ukutyibilika, kunye nezixhobo. Izixhobo zibandakanya izinto ezivela kubavelisi begama lophawu kwaye ukuba awufumani oko ukufunayo ungangenisa okwakho.
Uyilo lweSoftware eyiNtloko:
Undwendwelo - Umyili oyintloko
12. Igumbi lesitayile (Mahala) Ngokusayina kunye nale software yoyilo lwangaphakathi olusekwe kwiwebhu, awufumani nje ukufikelela kwizixhobo ezinokukunceda ucwangcise izinto zangaphakathi zekhaya lakho kodwa ukufikelela kuluntu lwabantu abanamakhaya onokwabelana nabo ngemibono kunye nokufumana inkuthazo.
Indawo efanelekileyo yomtshato oya kuyo
Igumbi leStyler livumele amalungu alo ukuba abonise uyilo lwangaphakathi olugqityiweyo kwaye babelane ngalo namanye amalungu ukuba enze izimvo. Ungabathanda kwaye ujoyine imincintiswano xa amalungu ebuzwa ukuba eze noyilo ngokwemixholo.
Igumbi lesitayile likuvumela ukuba wenze uyilo lwegumbi emva koko ulinikeze kwaye ulihombise. Unokuzoba ubeko lwakho usebenzisa imilinganiselo ngqo yegumbi olifunayo, okanye ukhethe ubume obukhoyo ngaphambili.
Kukho ilayibrari yeemveliso ezili-120,000 kunye neempawu ezenziwa ukuba zifumaneke kwindawo oyisebenzisa kwigumbi lakho loyilo. Ezi zinto ziyathengiswa ngabavelisi abanjengoIkea, John Lewis, Mooi nabanye. Kukho amakhonkco kwindawo apho ungabeka khona iodolo yento oyikhethileyo.
Ngaphandle koyilo lwegumbi, Igumbi leStyler likwavumela abasebenzisi ukuba benze iMoodboard enekholaji yezinto ezahlukeneyo onokuzisebenzisa kuyilo lwangaphakathi. Unokukhangela kwakhona iiMoodboards zabanye abantu ukuze uphefumlelwe.
umtshato izimvo zesikhululo sokutya
Igumbi eliQinisekisayo leVidiyo
Undwendwelo - Igumbi lokulala
13. Umboniso weMbonakalo yePeyinti yeOlimpiki (Simahla) Umbala weOlimpiki wePeyinti yesibonisi sisoftware yoyilo lwangaphakathi esisixhobo sokukunceda ukhethe imibala efanelekileyo yepeyinti yegumbi lakho. Le software ifumaneka simahla kwiwebhusayithi yepeyinti yeOlimpiki.
Le software ikuvumela ukuba ubone indlela imibala eyahlukeneyo efumaneka ngayo kwikhathalogu yepeyinti yeOlimpiki eya kubonakala ngathi kwigumbi lakho lobomi bokwenyani. Ikuvumela ukuba udibanise kwaye utshatise imibala kwaye ubone ukuba bayakubonakala njani ezindongeni, iisilingi kunye nokuncipha kwegumbi.
Ukuze usebenzise umboniso wombala wepeyinti weOlimpiki, kuya kufuneka uthathe umfanekiso wegumbi ojonge ukupeyinta. Ngenisa imifanekiso yelo gumbi kwiVidiyo yeOlimpiki yokubonwa kombala. Ukusuka apho, unokukhetha imibala eyahlukeneyo yepeyinti kwaye uyisebenzise kwiindawo ozifunayo. Oku kukuvumela ukuba ubone ukuba igumbi lakho liya kujongeka njani nalemibala eyahlukileyo PHAMBI kokuba uye kuthenga ipeyinti.
Sebenzisa iColorclix kunye nePeyinti yoMbonisi wePeyinti weOlimpiki:
Undwendwelo - Ipeyinti yomboniso wepeyinti yeOlimpiki
14. UMcwangcisi weKhaya we-IKEA Isoftware yoyilo yenziwe ifumaneke yifenitshala enkulu ye-IKEA ngoko akumangalisi ukuba olona phawu lubalaseleyo lomcwangcisi weKhaya laseKhaya ligalari ebanzi yefanitshala ye-IKEA kunye nezinto zokuhombisa onokuzirhuqa kwaye uyiyeke kubume begumbi.
Umcwangcisi wekhaya we-IKEA uvumela ukuba ubeke imephu malunga nokuba igumbi lakho liza kubonakala njani xa unikwe ifenitshala ye-IKEA. Ungayicwangcisa ifenitshala kunye nokuhombisa ngokweenkcukacha zekhaya lakho, wenze isicwangciso somgangatho esiyinyani kwimilinganiselo yekhaya lakho. Oku kuqinisekisa ukuba ifanitshala ayizukulingana nje nokubonakala kwekhaya lakho kodwa ubukhulu bayo.
Ngaphandle kokukuvumela ukuba ubone ukuba ifenitshala ingabonakala njani kwigumbi lakho, isiCwangcisi seKhaya se-IKEA sikwazisa ukuba singabiza malini kwaye sigcina uluhlu lweendleko zizonke onokukhetha kuzo. Isicwangciso osenzileyo sinokujongwa kwi-2D okanye kwi-3D kwiscreen. Unokuprinta isicwangciso kwaye uhambe naso kwivenkile ye-IKEA ukuze ukwazi ukuthenga ukhetho lwakho.
Ikea isiCwangciso seKhaya iVidiyo:
Undwendwelo - UMcwangcisi weKhaya waseIkea
15. UMyili weGumbi eliyiNtloko likaLowe (Simahla) Le software yoyilo ivela kwinkampani yokuphucula ikhaya iLowe kwaye inokufumaneka simahla, kwi-intanethi kwindawo yabo. Umyili wegumbi elifanelekileyo likaLowe uyakuvumela ukuba uyile igumbi ekuqaleni, usebenzisa eyakho imigaqo kunye nemilinganiselo okanye ngokusebenzisa itemplate. Zintathu iindidi zamagumbi onokuthi uyile kunye noMyili wegumbi elifanelekileyo: Amakhitshi, amagumbi okuhlamba kunye namagumbi okuhlambela.
Nje ukuba uthathe isigqibo ngohlobo lwegumbi lakho kunye nobeko, unokongeza iimveliso ezifumaneka kwiivenkile zikaLowe kuyilo lwakho lwegumbi. Izinto ezithile eziza kubakho ziya kuxhomekeka kuhlobo lwegumbi lakho.
Umzekelo, ukuba yindawo yokuhlambela uza kunikwa izindlu zangasese kunye namanzi, ngelixa uyilo lwasekhitshini luya kuba nokhetho lokongeza izixhobo zokupheka. Uya kuvunyelwa ukuba ukhethe imibala kunye nezinto oza kuthi uzisebenzise eludongeni lwakho, eluphahleni nakwimigangatho.
Ungalijonga igumbi lakho ukusuka kwii-engile ezahlukeneyo kwaye wenze utshintsho njengoko ubona kufanelekile. Xa uthathe isigqibo kuyilo lokugqibela, emva koko ungagcina kwaye uprinte uyilo lwakho. Uluhlu lokuthenga luyakwenzelwa wena kuxhomekeka kukhetho olukhethileyo xa uyila igumbi.
Ukuze usebenzise isoftware yoyilo lwangaphakathi lweLowe kuya kufuneka ufake usetyenziso lwabo oluza kuvumela ukufikelela.
16.Iprinta encinci yeBlue (Simahla) Umshicileli oMncinci oMnyama sisoftware yasimahla yoyilo lwangaphakathi enokusetyenziswa kwi-Intanethi. Akukho sidingo sokukhuphela okanye ukufaka nantoni na ukusebenzisa le software yoyilo lwangaphakathi ukukunceda wenze isicwangciso ngaphakathi nangaphandle kwekhaya lakho. Iphrinta encinci eBlue ingasetyenziselwa izinto zangaphakathi kunye neempawu zangaphandle zekhaya lakho njengoko ikuvumela ukuba usebenzise iintlobo ezimbini zesoftware. Eyokuqala sisicwangciso somgangatho okanye isoftware yocwangciso lwasekhaya kwaye okwesibini yigadi kunye nesoftware yokuhombisa umhlaba.
Ukucwangciswa komgangatho kukuvumela ukuba wenze imephu esemgangathweni yamagumbi asendlwini yakho. Kukho ilayibrari yeempawu ezinje ngeefestile, iindonga neengcango onokuthi urhuqe kwaye ulahle kuzo naphi na apho ufuna khona kwimephu yakho yomgangatho ukuze ubone ukuba ufuna ukubonwa njani amagumbi.
Igadi kunye nembonakalo yomhlaba isetyenziselwa ukucwangcisa ngaphandle kwekhaya lakho ukusuka emhlabeni. Udonsa kwaye uwise imithi kunye neentyatyambo endaweni kwaye unokongeza ezinye izinto ezinjengamatye eepave kunye namachibi. Ungajonga izicwangciso zakho nokuba zivela phezulu okanye uhamba nge-3D. Unokuprinta isicwangciso sakho esigqibeleleyo.
Uphengululo oluncinci lwePrinta eBlue
Undwendwelo - Iphrinta encinci yeBlue
17.Isoftware yoyilo lwangaphakathi lweSmartDraw (iDemo yasimahla kunye neNtlawulo) Isoftware yoyilo lwangaphakathi lweSmartDraw sisoftware yoyilo oluhlawulelweyo, kodwa ungazama kwaye unikeze ngesiboniso simahla. Le software yoyilo ikuvumela ukuba uyile iiplani zeliphi na igumbi endlwini okanye kuyo yonke indlu. Iphakheji esisiseko inelayibrari yesicwangciso somgangatho weetemplate ezingaphezu kwe-10 ezenziwe ngokulula. Izicwangciso ezenziwe kusetyenziswa le software zinokujongwa kuphela kwi-2D.
Isoftware yoyilo lwangaphakathi lweSmartDraw iza nelayibrari yento ebanzi enokhetho ekuvumela ukuba wenze intengiso yefanitshala kunye ne-HVAC kunye nezibane kunye neenkqubo, iikhabhathi, umhombiso kunye nezinto zomhlaba.
Kukho ukhetho apho unokukhetha ukubonwa okunokusetyenziselwa ukuyila i-flooring, i-top top kunye nezinye izinto zegumbi. Ukuba ufumanisa ukuba yintoni ekhoyo ekhoyo, kukho inketho onokungenisa kuyo imifanekiso yezinto okanye izinto onqwenela ukuzibandakanya.
Funda indlela yokusebenzisa iSmartdraw
Undwendwelo - I-SmartDraw
18. IZiko loYilo lweHardware yasekhaya (Simahla) IiHardware zeKhaya zeKhaya eziThengiswayo zezona zinto ziphambili zabathengisi, amaplanga, izinto zokwakha kunye nokubambisana kwefanitshala. Kwiwebhusayithi yabo, baneZiko loyilo elineenkqubo zokuyila zangaphakathi zasimahla ezisemgceni. Ezi ziyafumaneka kwilifu kwaye zinokufikeleleka. Konke okufuneka ukwenze kukuya kwiwebhusayithi yeHardware yasekhaya kwaye ucofe ukhetho lwesoftware onomdla kulo.
Umboniso weBeauti-Tone Umboniso obonisiweyo wenzelwe ukukunceda uthathe isigqibo sokuba yeyiphi imibala esebenza ngokugqibeleleyo kwindawo yakho. Ngeli xesha, uMyili weKhitshi usebenza ukukunceda ukuba uze noyilo lwekhitshi lakho. Umboniso weBeauti-Tone Umboniso obonakalayo ufuna ukuba ulayishe umfanekiso wegumbi okanye indawo ofuna ukuyifaka imibala kwaye ukhethe izikimu ezahlukileyo zemibala kuyo. Unokukhetha iindawo ezikhoyo kunye nokudlala ujikeleze ngezikimu zombala.
UMyili weKhitshi ukuvumela ukuba ukhethe ubume bekhitshi esele ikho okanye uzenzele eyakho. Unokongeza izinto zasekhitshini kwaye ukhethe udonga, isilingi kunye nemibala yomgangatho wokuthatha isigqibo sokuba ikhitshi lakho liza kubonakala njani. Isoftware ikwenzela uluhlu lokuyokuthengela ngokusekwe kukhetho kunye nezinto ozibeke kuyilo lwakho.
Undwendwelo - Uyilo lweHardware yasekhaya
19.I-OpunPlanner (Simahla) I-Opunplanner liqonga lokuhombisa lasimahla kwi-intanethi elinikezela ngezixhobo onokuzisebenzisa ukubona nokuyila ubume begumbi. Xa usebenzisa i-Opunplanner, kukho indawo enye yezixhobo zoyilo ezisebenzisanayo onokuzisebenzisa kunye negalari yoyilo apho ungabona khona kwaye usebenzise abanye abasebenzisi bokuyila kwendalo.
Izithembiso zePandora ziphakamisa igolide
Ukuqala ukusuka ekuqaleni kukuvumela ukuba udlale ngokujikeleza uyilo lwakho lobuqu okanye usebenzise itemplate yegumbi elisetiweyo. Ungazitshintsha izinto zomgangatho wegumbi kunye nephepha lodonga kunye nezitayile zokubonelela kunye nemibala.
Kukho iindlela ezahlukeneyo zamagumbi ezikuvumela ukuba wenze igumbi, ucacise ubungakanani bayo kunye nokubekwa kunye nesitayile sezinto ezifana neefestile neengcango. Unokongeza kwaye ubeke ifanitshala kunye nokutshintsha ubungakanani befenitshala kunye nombala. Ungagcina kwaye uprinte uyilo olwenziweyo. Isicwangciso sikuvumela ukuba wenze iphepha lokusebenzela lokucwangcisa igumbi onokuligcina njengefayile yokuthumela ngaphandle okanye ukungenisa elizweni kamva. Unokwabelana nabanye ngendalo yakho ukuhlela nokuvunywa kunye nokuvelisa ukunikezelwa kwe3D yoyilo lwekhaya lakho.
Undwendwelo - Isicwangciso seOunun
20. Suite Designer yasekhaya 2015 (ihlawulwe) I-Suite yoMyili weKhaya ihlawulelwa isoftware yokulungisa kwakhona iiprojekthi kunye noyilo. Oku kukuvumela ukuba uyile isicwangciso sangaphakathi nangaphandle kwekhaya lakho.
Isixhobo sokuFumana isiCwangciso siya kukunceda ukuba uphuhlise isicwangciso esichanekileyo sekhaya lakho, sikubuze ukuba mangaphi imigangatho, amagumbi okulala, kunye neendawo zokuhlambela ozifunayo. Njengoko uzobe kwaye uzobe kwakhona iindonga zamagumbi akho, inkqubo iya kubonelela ngokuzenzekelayo ngemilinganiselo kwaye uyihlaziye ngokufanelekileyo. Unokufikelela kwithala leencwadi lezinto ezingama-6,000 kunye nezinto onokuzisebenzisa ukubonelela nokuhombisa amagumbi akho. Isibalo sezinto okhethe ukuzisebenzisa ziya kugcinwa ukuze ukwazi ukuqikelela iindleko zeprojekthi.
Izicwangciso zinokujongwa kwi-2D kunye ne-3D, ngaphezulu okanye kwinqanaba lomhlaba. Unokhetho lokubeka imephu ekhayeni lakho kwaye urekhode indlela ebonakalayo onokwabelana ngayo. Isixhobo seLandscaping sikuvumela ukuba uphinde uphinde uphinde wenze iimeko kunye neempawu zekhaya lakho ezokuma phezu kwazo.
Ukunceda ukukhanyisa uyilo lwakho kukho ilayibrari yedijithali yezityalo ezili-1,500 ezinokubekwa kwisicwangciso sakho. Ulwazi olubalulekileyo ngesityalo ngasinye, olufana nendlela yokusihoya nokuba luya kukhula kakuhle phi.
Suite yoyilo lweKhaya iVidiyo yoThutho yeDemo ka-2015
Undwendwelo - Suite yoyilo lweKhaya
21. Isoftware yoyilo lweHGTV (ihlawulwe) Le yangaphakathi, ikhaya kunye neqonga loyilo lomhlaba oluvela kwi-HGTV kwaye libandakanya ilayibrari yendlela yokwenza iividiyo zokubonelela ngesikhokelo kunye nenkuthazo xa usiza noyilo lwakho lwasekhaya.
Unokukhetha phakathi kokudala isicwangciso sakho somgangatho wesiko okanye usebenzisa iisampulu zemodeli zesampulu. Zimbini iindlela apho unokujonga khona izicwangciso, i-2D kunye ne-3D kwaye ezi zisebenza ngokudibeneyo. Nanini na xa utshintsha into kwisicwangciso se-2D, utshintsho luya kuvela ngokuzenzekelayo kwimodeli ye-3D. Iqonga leSoftware yoYilo lweHGTV libandakanya izinto ezingaphezu kwe-1,200 kubandakanya ifanitshala kunye nezixhobo, iingcango, iifestile kunye neempawu zokukhanyisa.
Xa ugqibezela uyilo lwakho, ungahamba ngokuhamba nge-3D olukhenketho olubonakalayo lwemodeli yakho. Unokwenza i-movie ekhawulezileyo yokuhamba kwakho okunokuthi emva koko wabelane nabanye.
Amanqaku amabini aluncedo kule software iya kuba sisixhobo sayo sokukhanyisa kunye nenqaku laso lokuGcina. Isimulator sokukhanyisa sinokulinganisa naliphi na ixesha losuku kwaye utshintshe ukukhanya ngokufanelekileyo. Oku kunokukunceda uthathe isigqibo sezona ndawo zibalaseleyo zokuba neefestile, iingcango kunye nezibhakabhaka. Inqaku leGreen Green likunceda uyile ikhaya lakho ukuba libe namandla ngakumbi kwaye libe nendawo encinci yonyawo oluprintiweyo.
Intro emfutshane yeVidiyo kwisoftware ye-HGTV yoyilo
Undwendwelo - Isoftware yoyilo lweHGTV
22.I-App yangaphakathi ye-3D (yasimahla) Idalwe yiBelight Software, le yisoftware yasimahla yeCAD. Nge-Live yangaphakathi ye-3D, unokuyila iiplani zomgangatho we-2D ekhayeni lakho kwaye emva koko ujonge njengoko ubume bakheke kwimodeli ye-3D emva koko uyile kwaye uhombise ngaphakathi, ukhetha ifenitshala kunye nemibala.
Uyilo kunye nokuhombisa ngaphakathi kwizicwangciso zomgangatho, ukhetha ifenitshala kunye nemibala ngokokuthanda kwakho. Isoftware iza nethala leencwadi elingaphezulu kwe-1,200 yezinto, ifanitshala, imihombiso, iingcango nokunye. Ungatshintsha kwakhona amalaphu, imibala kunye nokugqitywa koyilo lwakho kunye nethala leencwadi elingaphezu kwe-1,500 yezinto onokukhetha kuzo.
Unako ukucoca ukukhanya kwangaphakathi kuyilo lwakho njengoko le software ikuvumela ukuba usete umbala wokukhanya kunye nokukhanya kwento yonke ekhanyayo. Unokuhlengahlengisa ukukhanya kwendalo okuvela ngaphandle ngokuseta ixesha losuku kunye nendawo. Isixhobo sokulinganisa kunye nezichasiso sikuvumela ukuba uthathe kwaye ungeze amanqaku kwisicwangciso somgangatho we-2D onokwabelana ngaso neekhontraktha kunye nabayili bezakhiwo. Ungathatha iifoto zoyilo lwakho kwii-engile ezahlukeneyo zekhamera okanye ngexesha lokuhamba-nangona kunjalo. Unokwabelana nabanye ngalezi foto ngeDropbox, Facebook kunye ne-imeyile.
Phila ngaphakathi kwiDemo ye3D
Undwendwelo - Phila ngaphakathi kwi-3D
23. ICylindo (iDemo yasimahla kunye neNtlawulo) ICylindo yinkqubo yoyilo lwangaphakathi lwe3D. Ikuvumela ukuba uthathe ifanitshala yakho, uyijike ibe ngumfanekiso we-3D onokuyifaka kuyilo lwegumbi. Oku kukunika umbono wokuba ifanitshala yakho iza kujongeka njani kuyilo olo. Kuqala uzoba isicwangciso segumbi lakho okanye usebenzise itemplate. Yongeza iingcango, iifestile kunye nezinto ezilungisiweyo, tshintsha inkangeleko yeendonga zakho kunye nomgangatho, tsala iifenitshala kulwakhiwo.
I-360 HD Viewer ibonisa iimveliso ezikumgangatho ophezulu wokusonjululwa ngombono we-360 degree kunye nokusondeza. Jonga iimveliso zekona nganye kwi-zoom yomgangatho we-HD. IsiCwangcisi segumbi sikuvumela ukuba ubone ukuba ifenitshala iya kujongeka kanjani ekhayeni lakho ngaphambi kokuba uyithenge. Zoba iiplani zomgangatho wakho kwaye uyile ingaphakathi lakho emva koko ulibone kwi-3D.
UCylindo usebenza ngefanitshala kunye neenkampani zoyilo ezinje ngeSinyithi, ifanitshala yegalari ye-G / F, iBohus, kunye ne-Espasso IDdesign. Inika ukuthengwa ngokulula konqakrazo lwezixhobo kwaye iyahambelana namaqonga amakhulu e-ecommerce anje ngeMagento, Shopify, Volusion, Bigcommerce, Woo Commerce, kunye neDemandware.
Amagqabantshintshi oCwangciso lweGumbi laseCylindo
Undwendwelo - UCylindo
24. Isicwangciso soMgangatho weTurbo 3D (ihlawulwe) IsiCwangciso soMgangatho weTurbo 2019 i-3D ihlawulwe isoftware yoyilo lwangaphakathi ekuvumela ukuba wenze isicwangciso sazo zonke izigaba zokwakha ikhaya lakho. Le software ikuvumela ukuba ucwangcise phantse zonke izinto kwikhaya lakho lamaphupha kubandakanya isiseko, inkqubo ye-HVAC, inkqubo yombane kunye nemibhobho yamanzi. Ungazoba iindonga uze ubeke ifestile neengcango kuwo onke amagumbi. Ikuvumela ukuba wenze ngokwezifiso uphahla lwendlu yakho ecwangcisiweyo.
Ayisiyi kuphela le software ekuvumela ukuba uzobe uyilo lwamagumbi akho, ikwavumela ukuba ubenombono kwaye ucwangcise ukuba igumbi ngalinye liya kubonakala njani, libaxhobisa ngeekhabhathi zesiko, izibane, ifanitshala kunye nezixhobo. Ikuvumela ukuba uyile inkangeleko yangaphandle kunye neempawu ezinje ngeekhonkrithi, iingcingo, iindlela, ingca kunye negadi. Isicwangciso seMigangatho yeTurbo 3D ikuvumela ukuba wenze kwaye udlale ngeenxa zonke ngeebhodi zemibala eziya kukuvumela ukuba usebenzise imibala oyithandayo kumagumbi okuhombisa ukuze ufumane iskimu esifanelekileyo. Isicwangciso seTurbo Floor Plan 3D siza kunye neZiko loQeqesho, ingqokelela yeevidiyo ezili-100 zokukunceda uphuhlise izakhono zakho zoyilo. Ikwanalo noqikelelo lweendleko oluzenzekelayo. Ngaba uyacetyiswa ukuba le software ijolise kwi-Autocad kwaye ifuna ukunyamezela ukuze isebenze.
Isicwangciso seTurbo Floor Isishwankathelo se3D
Undwendwelo - Isicwangciso seTurbo Floor 3D
25.Iidololabhu (Simahla) Inkqubo yesoftware yoyilo lwasimahla ye-iPad, iiDecolabs zikuvumela ukuba uthathe ifoto yegumbi lakho emva koko ukhangele i-e-ikhathalogu yeemveliso ukuze ukhethe kwaye ubeke ukuze ujonge indlela eziya kujongeka ngayo kwigumbi lakho, Ezi e-khathalogu zibonelela ulwazi oluneenkcukacha nolugqibeleleyo ngemveliso kubayili kunye nazo zonke iimodeli ezikhoyo. Insiza isebenzisa oko ikubiza ngokuba yinto yokwenyani, ubeka izinto zefanitshala ezibonakalayo kwimifanekiso yekhamera yokwenyani. Oku kukuvumela ukuba wenze uvavanyo olungcono lokuba ifenitshala iyakulunga njani na kwisithuba sakho.
Insiza inika abasebenzisi bayo ukumakisha abanokuthi baprinte kwaye babeke kwigumbi ukwenza ukubonwa kwexesha lokwenyani. Unokufumana umbono oqinisekileyo wokuhonjiswa kwegumbi kwimizuzwana nje. Uyilo lunokwabelwana ngalo kwimidiya yoluntu okanye kunye noluntu lwaseDecolab lwabaqulunqi ukuze ufumane ingxelo yoyilo kunye neengcebiso. Unokhetho lokwabelana noluntu luphela okanye nenani elithile labahlobo Emva kokubona indlela ifenitshala eya kujongeka ngayo kwigumbi lakho, unokhetho loku-odola ngokusebenzisa iapp. Iimveliso zivela kubaqulunqi abanjengoArne Jacobsen, B&B Italia, Cassina, Fritz Hansen, Vitra, Molteni & C.
Ushwankathelo lweVidiyo yeDecolabs
Undwendwelo - Amagqabi
26.I-Punch Software (ihlawulwe) I-Punch Software yisoftware ehlawulwayo esetyenziswa ngabaqulunqi bangaphakathi abaziingcali. Le software yoyilo ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo kunye neephakeji ukuze uyile ikhaya lakho liphela ukuya kumagumbi ngamanye. I-Punch Software yenza uyilo ngenqanaba leenkcukacha ezingenakulinganiswa nenye isoftware yoyilo. Izicwangciso zivela ngomgangatho ofana nefoto.
I-Punch Software ikuvumela ukuba uzame ngeendlela ezahlukeneyo zombala, ukukhanya, izixhobo, ifanitshala, ukugqiba, iipeyinti nokunye. Kumagumbi owakhayo, unokubeka endaweni yefenitshala, iimfama, iikhethini, iintlobo zomgangatho. phantse nayiphi na into eyenza uyilo lwasekhaya. Into eyandisiweyo kunye nelayibrari yezixhobo yongezwa ngokulula yinto ekuvumela ukuba ungenise iifoto kunye nemifanekiso yento oyifunayo.
ingoma esuka kumama isiya kunyana wakhe
Inqaku lePallet yombala likuvumela ukuba wenze iskimu semibala emininzi kunye nokutshintsha phakathi kwazo ude ufumane eyona uyithandayo. Unokujonga amagumbi nge-26 kunye ne-3d kwaye usete ii-angles zekhamera. Kukho umbono woonodoli, umbono wesakhelo socingo kunye nokuhamba nge3D. Isoftware yoyilo lwangaphakathi enemisebenzi emininzi ifuna ukufundwa kunye nokuzinikela kwexesha ekufundeni. Le nkqubo ifuna isuntswana lokufunda ukuze ukhawuleze kwaye wenze uyilo lwakho lwasekhaya.
I-Punch Software-Yakhelwe iNdlu
Undwendwelo - Isoftware yePunch
Amanqaku ayiliweyo oYilo lwaNgaphakathi unokuthanda:
Isoftware yokuRekhoda igumbi lokuhlambela - Uyilo lweKhitshi eNtofontofo - Isoftware yoyilo lweKhabinethi yeKhabhinethi
Izipho zentombi ezitshatileyo ezingabizi kakhulu
Zingakanani iindandatho zokuzibandakanya
banxiba ntoni abafazi kumtshato weqhina elimnyama
umhombiso womtshato we-rustic uyathengiswa
yimalini ilokhwe yomtshato ephakathi
Iindwendwe zomtshato zomtshato ziwa ngo-2020